ယနေ့ မှတ်တမ်း (@aggamun) — Steemit
ယနေ့ မှတ်တမ်း (@aggamun)
aggamun (57) in blog • last month
ဒီနေ့တော့ ဘဒို ကြီး သတိပေးတာနဲ့ c2 အတွက် ပိုစ့်ရှာပုံတော် ဖွင့်ဖို့ Partiko app ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ myanmar tag ရွေးပြီး စစ်ထုတ်လိုက်တော့ ပိုစ့် တွေ သိပ် မတွေ့ရတော့ ထူးဆန်းနေမိသည်။ ဒီနေ့ စာ သိပ်မရေးကြလို့လား ဟု ဘဒိုက ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော်၏ စိတ်ထဲမှာတော့ အနည်းငယ် ထူးဆန်း နေမိသည်။
ကျွန်တော် ပိုစ့် စတင် ရှာဖွေချိန်ကတော့ ညနေ ၃ နာရီ ခန့် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အခြားနေ့တွေ ဆိုလျှင် ယခု အချိန်ဆို အနည်းဆုံး ၁၀ ခု ကျော်မျှ ပိုစ့်တွေ ရှိနေတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများ၏ အတွေး အမျိုးမျိုး၊ အရေး အမျိုးမျိုး၊ အတွေ့အကြုံ အမျိုးမျိုး တို့ကို ရသ စုံ ခံစား ဖတ်ရှုနေရချိန် ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခုခု လိုနေသည်ကတော့ အမှန်ပင်။
Sbd ကလည်း တစ်ကျပ် တင်းတင်း ပြည့်ရုံသာမက သိသိသာသာ မြင့်တက်လာနေသည်။ ပညာရှင်များ ခန့်မှန်းထားသော ကာလသို့ ရောက်လာ တော့မည်ဟု ထင်မိသည်။ ကျွန်တော် အတွက်ကတော့ ဖိုးသူတော် ကဲ့သို့ပင်။ မျက်စိလည်လေ ဆန်ရလေ ဖြစ်သည့် အတွက် တက်ချင် သလောက်သာ တက်ပါဟု သဘော ကောင်းနေမိသည်။
drugwars ကလည်း ပေးတာနည်းလာတော့ lvl မြှင့်ဖို့က မဖြစ်မနေ လိုလာပြီလေ။ lvl မြှင့် ဖို့ resource တွေ စုရတာကလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ အပြည့် ဖြစ်သည်။ ပူပူနွေးနွေး drug 49k ( STEEM ပမာဏ 0.45 ခန့် လှူထားတာက မကြာသေးဖူး မလားဗျ။ ဒီလိုပဲ lvl တင်ဖို့ ဆိုပြီး စုထားရာက ပေးလိုက်ရတာ ဆိုတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့ပေါ့လေ။
စစ်သား ထုတ်လုပ်ပုံ ဗျူဟာကို လည်း နည်းနည်းတော့ လေ့လာထားမှ ဖြစ်မယ်။ နို့မို့ဆိုလား ထုတ်မလောက် ထည်မလောက် ဖြစ်တော့မည်။ ထိုကြောင့် ဒီနေ့ ဖတ်စရာကား လေ့လာစရာကား drugwars ၏ attacking tactic ကိုသာ ဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ် မိမိ သတိပေးရင်း ……
To play moonSTEEM : https://www.moonsteem.com/?ref=aggamun
Posted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=49
blog life myanmar steempress
drugwars ကမြတ်တောင်နေပြီပဲ ဘရို။ ကျွန်တော့်ပိုစ့်လဲ ရွေးပေးဦးလေ။ ပိုစ့်နှစ်ခုကတော့ thumbup မလုပ်ရသေးလို့ ချန်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ကြည့်လေဘရို။ ဘယ်လိုတိုက်ရတယ်ဆိုတာ သိသွားမယ်။
ဟုတ် ဘဒို ရေးထားတာ သေသေချာချာ နားလည် အောင်တော့ ဖတ်နေပါတယ်။ ဘဒို ပို့စ်က $1 ကျော်တော့ ကျနော် မရွေးမိတာပါ။ sorry!
lwinoomg (49) · last month
ဘရို​ရေ ​ဆော့ကိုမ​ဆော့တပ်​လို့တိုက်​ချင်​သ​လောက်​သာတိုက်​ယူကြ​တော့ မတပ်​နိုင်​ဘူး
အေးဗျာ လွယ်တော့ လွယ်တယ်ဗျ။ အနားမှာ ရှိရင် ပြောပြရတာ မခက်ဘူး။ စာရေးပြတာက ခက်တယ်။
ကြိုက်တယ် ဘရို။ နည်းနည်းယူသွားတယ်။
honeylay2001 (43) · last month
တကယ့် gamer ကြီးပါလား ဗျ
17.460 STEEM from daily
7.098 STEEM from heist
First transfer was before 28.79 days.
Your ROI per day is 4.37 % and you are earning approx. 0.85 STEEM per day.
Your ROI per day is 4.65 % and you are earning approx. 0.91 STEEM per day.
မိတ်ဆွေ၏ ပိုစ့်အား C2 Myanmar Cuation အဖွဲ့မှာ ရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။